प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकको तयारीमा छ । मंसिर ५ देखि ९ गतेसम्म राजधानीमा हुने महासमिति बैठकमा विधान संशोधन हुँदैछ । नयाँ विधान लागू भएपछि कांग्रेस नयाँ ढंगले अघि बढ्ने बताइन्छ । यसका साथै बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक नीतिलगायतका विषयमा छलफल गरी निर्णय गरिनेछ । कांग्रेस नेताहरूले महासमिति बैठकले कांग्रेसमा रक्तसञ्चार हुने र परिवर्तनको अनुभूति हुने बताइरहँदा विश्लेषकहरूले भने बैठक कर्मकाण्डी मात्रै हुने सक्ने आशंका गरिरहेका छन् । आन्तरिक राजनीतिमा विवादै विवादको घेरामा रहेको कांग्रेस महासमिति बैठकपश्चात् कसरी अघि बढ्ला ? पार्टीभित्रका विवाद व्यवस्थापन गरी राष्ट्रिय राजनीति र जनजीविकाका मुद्दामा खरो उत्रन सक्ला ? यी र यस्तै विषयमा कांग्रेसले शुक्रबार आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सहभागी नेतासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्छ
महासमिति बैठकको पहिलो एजेण्डा विधान हो, जुन संशोधित हुँदैछ, त्यसलाई पारित गर्ने नै हुन्छ । र, त्यो विधानमार्फत नै हाम्रो पार्टीलाई भविष्यमा कसरी सञ्चालन गर्ने ? यस कुराको स्पष्ट सन्देश हुन्छ । आगामी दिनमा मुलुकका सबै जनता र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी विधानमै व्यवस्था गरिरहेका छौं । त्यसका लागि हामी हाम्रो सदस्यतालाई व्यापक बनाउन चाहन्छौं । पार्टीमा अब एकल सदस्यता प्रणाली रहन्छ, जसले सबैलाई समेट्न सकियोस् र सहज ढंगले सदस्य बनाउन सकियोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ । सहज ढंगले सदस्यतालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउने उद्देश्य एकातिर हो भने अर्कातिर पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा मतदाता बनाउन हामी केही प्रावधान र मापदण्ड संस्थागत रूपमा पारदर्शी ढंगले मूल्यांकन गरे पार्टीको मतदाता बनाउने अर्को चरण राखेका छौं ।
नेपाली कांग्रेसको सदस्य हुन चाहन्छु भन्नेलाई सदस्यता दिन्छौं । पार्टीको आन्तरिक संरचनाको निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि भने केही सर्त वा प्रावधान राखेका छौं । जस्तो एक वर्षभित्र प्रत्येक तहमा पार्टीका संरचनाहरूले वार्षिक क्यालेन्डर तयार गर्छ । त्यो क्यालेन्डरमा कोही व्यक्ति कति सहभागी भएको छ ? त्यसैको परीक्षण गरेर कम्तीमा ८० प्रतिशत कार्यक्रममा सहभागी भएको व्यक्ति एक वर्षभित्र नवीकरण हुन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा मतदाता बन्न सक्छन् । अब केन्द्रीय सदस्य, सांसदहरू पनि आन्तरिक निर्वाचनमा तल्लो तहबाटै निर्वाचन लडेर आउनुपर्ने सुझाव मस्यौदामा आएको छ । यी सबै विषयका बारेमा केन्द्रीय समितिले महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्छ र त्यहीँ अन्तिम निर्णय हुन्छ ।
हामी अहिले कम्युनिस्टहरूभन्दा कमजोर भएका छौं । संख्यामा कम भयौं, प्रतिपक्षमा छौं । कम्युनिस्टहरूले शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । हामीले प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेका छौं । मलाई लाग्छ, हाम्रा आन्तरिक द्वन्द्व पनि आगामी दिनमा रहनेछैन । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा, निर्वाचनका क्रममा देखिने समूहगत अभिव्यक्तिलाई त्यसैमा सीमित राख्नुपर्छ । आन्तरिक निर्वाचन सकिएपछि जित्नेले हार्नेलाई समेट्ने, हार्नेले जित्नेलाई सहयोग गर्ने वातावरण बन्छ र पार्टी एकढिक्का भएर अघि जान्छ ।
नयाँ विधान लागू भएपछि परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ
हाम्रो महासमिति बैठकमा विधान संशोधन नै प्रमुख एजेन्डा हो । विधान संशोधन समितिमा ८५ प्रतिशत कुरा टुंगिएका छन् । १५ प्रतिशत कुरामा छलफल भइरहेको छ । केही कुरा नमिल्न पनि सक्छन् र फरक मतका साथ केन्द्रीय समितिमा जान पनि सक्छ । त्यो अवस्था भयो भने पनि हामीले छिटो गर्नका लागि एक–दुई विषयमा फरक मतका साथ केन्द्रीय समितिमा लैजान सकिन्छ भनेका छौं । विधान मस्यौदा समितिभित्र धेरै ठूलो विवाद र समस्या छैन । नेपाली कांग्रेस यो विधान लागू भएपछि साँच्चै परिवर्तन भएको अनुभूति हुने स्थिति बन्छ ।
महासमिति बैठक मस्यौदा समितिले समयमा विधान नबुझाएका कारणले महासमितिको बैठक सार्नुपर्ने अवस्था हुँदैन, तर पनि चाडबाड र अरू विभिन्न समितिले प्रतिवेदन बनाउन समय अभावका कारण वा विभिन्न कारणले केही दिन सर्ने चर्चा सुनिएको छ, तर हाम्रो भनाइ महासमिति बैठक बस्न यसै ढिलो भयो, त्यसैले तोकिएकै समयमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । यो महासमितिको बैठकमा विशेष गरी विधान मस्यौदा पास गर्ने र कांग्रेसले तत्काल अख्तियार गर्नुपर्ने नीति, रणनीति र कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने परिस्थिति हुन्छ ।
हामीले निर्वाचनका बारेमा पनि प्रशस्त छलफल गरेका हौं । त्यो छलफल अझै टुंगिएको छैन र निर्वाचनमा पराजित हुनुको कारण गहिराइमा खोतलेर पत्ता लगाउने र समस्या निवारण गर्ने भनेर केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ । महासमितिको बैठकमा पनि यी कुरा आउँछन् । कमजोरी, समस्या के हो ? अवलम्बन गरिनुपर्ने नीति के हो ? भन्नेबारेमा महासमितिको बैठकमा पनि छलफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले पार्टीलाई सशक्त बनाउनका निम्ति क्रियाशील भएका मान्छेहरूको भेला हो, महासमिति बैठक भनेको । त्यसैले कांग्रेससँग जोडिएका सबै विषयका बारेमा त्यहाँ कुरा उठ्छ र छलफल हुन्छ ।
हामीले एक प्रकारको सदस्यता मात्रै कायम गर्ने भनेका छौं । त्यो सदस्यताको नाम हुन्छ— नेपाली कांग्रेसको सदस्य । हरेक मान्छे जो नेपाली कांग्रेसको सदस्य लिन्छ, त्यो मान्छे नेपाली कांग्रेसको सदस्य हुन्छ । क्रियाशील सदस्य, साधारण सदस्य वा अरू कुनै प्रकारको सदस्य अब हुँदैन । त्यो एक प्रकारको सदस्य मात्रै कायम गर्ने भनेर हामीले भनेका छौं । तर, त्यसमा चाहिँ सबै सदस्यहरूसँग भोटिङ राइट्स हुने कि नहुने भन्नेबारेमा चाहिँ छलफल भइरहेको छ । मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने सबैसँग मतदान गर्ने अधिकार हुनुपर्छ, सबैको अधिकार समान हुनुपर्छ । सदस्यले नै आफूभन्दा क्रियाशील सदस्य निर्वाचित गर्न पाउनुपर्छ । जस्तै, १ सय जना कांग्रेस सदस्य भए भने १० जना क्रियाशील सदस्य निर्वाचित गर्न सक्छन् । नेपाली कांग्रेसको सदस्य गोप्य हुँदैन, त्यो खुला हुन्छ । नेपालको कानुनले वर्जित गरेको र अरू पार्टीको सदस्य रहेको अवस्थाबाहेक लिन चाहनेले सदस्यता लिन पाउँछन् । पार्टीका नेताले वडा तहदेखि नै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएका छन् । तलै गएर चुनाव लड्ने वातावरण बन्न भन्ने लाग्छ, यद्यपि टुंगो लागेको अवस्था छैन ।
बैठक कर्मकाण्डी हुन हुँदैन
क्रियाशील सदस्यता भनेको पार्टीको सम्पत्ति हो । जो क्रियाशील सदस्य नेपाली कांग्रेसमा लामो समयदेखि आवद्ध छ र काम गरिरहेको छ । उसको पार्टीसँग भावनात्मक रूपमा गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । त्यसलाई हटाउँदा के प्रभाव पर्छ ? त्यो कति उपयुक्त हुन्छ ? भनेर केन्द्रीय समितिमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ । गुटबन्दी हाम्रो पार्टीको स्थापना कालदेखि नै कायम छ । लोकतान्त्रिक पार्टीमा गुटबन्दी कायम रहन्छ नै । त्यो निमिट्यान्न हुनै सक्दैन, गुट निरपेक्ष पार्टीको हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौं । सैनिक तानशाही, धार्मिक तानशाही र कम्युनिष्ट तानशाही यी व्यवस्थाहरूमा मात्रै गुट निरपेक्षताको कल्पना गरिएको हुन्छ ।
संस्थापनले विरोधी गुटलाई दबाउने कोसिस गरिरहन्छ र निमिट्यान्न पार्ने प्रयत्न गर्छ । प्रजातान्त्रिक विचार र पद्धति अवलम्बन गरेको पार्टीमा त्यस्तो कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन । तर, गुटबन्दी स्वस्थ र मर्यादित हुनुपर्छ । कामका विषयमा गुटबन्दी हुनु भएन । महासमितिको बैठकमा सांगठानिक एजेन्डा आउँदैछ । राजनीतिक एजेन्डा र अर्थनीतिसम्बन्धी प्रस्ताव आउँदैछ । चारवटा प्रस्ताव पेस गर्ने समिति नै बनेका छन् । समसामयिक राजनीतिका विषयमा देशभरबाट आएका साथीहरूको प्रस्ताव ल्याउन सक्नुहुन्छ । फ्लोरबाट पनि प्रस्ताव आउन सक्छ । समग्रमा नेपाली कांग्रेसलाई अहिलेको वस्तुस्थितिमा बलियो बनाएर यसको संगठनलाई सुदृढ बनाएर एक ढिक्का बनाएर अघि लिएर जाने भन्ने कुरा सघन बहस हुन्छ र त्यसले एउटा बाटो लिन्छ ।
यदि हामीले महासमिति बैठक कर्मकाण्डी बनायौं भने त्यो हाम्रा निम्ति र आउने पुस्ताका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ । समग्र लोकतान्त्रिक भविष्य मुलुकको जुन छ, त्यसका लागि पनि अन्याय हुन्छ । नयाँ पुस्तालाई हामीले न्याय गर्न सक्दैनौं । त्यसैले कर्मकाण्डी रूपमा हामीले बैठक सम्पन्न गर्न हुँदैन । यसलाई बुँदागत रूपमा आएका प्रस्तावहरूमा छलफल गरेर र तलबाट पनि नयाँ कुराहरू आउँछन् भने ग्रहण गरेर अन्तिम टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागौं
स्वार्थीहरूले गर्दा पार्टीभित्र गुट–उपगुट जन्मिएका छन् । कतिले प्रजातान्त्रिक पार्टीमा गुट–उपगुट हुनु स्वाभाविक भएको भन्ने गर्छन् । तर, गुट–उपगुट विचारका आधारमा हुनुपर्छ । विचारका आधारमा भएका गुट–उपगुटले बहस निम्त्याउँछ । बहसले विचार खार्ने काम गर्छ र पार्टीलाई ठीक निर्णय लिने दिशामा पु¥याउँछ, तर कांग्रेसभित्र अहिले विद्यमान गुट–उपगुट स्वार्थका कारण भएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर मुलुक र जनताप्रति हामी समर्पित हुने र बीपी, कृष्णप्रसाद र गणेशमानले गरेको मार्गदर्शनलाई अवलम्बन गरेर अघि बढ्यौं भने यो विवादको अन्त्य हुन्छ । हामीसँगै कर्मकाण्ड गर्ने, शुभकामना आदानप्रदान गरिरहने तर आत्मैदेखि शुभकामना नगर्ने, एकले अर्काको भलो नचाहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
मंसिर ५ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौंमा महासमितिको बैठकले तीन–चारवटा काम गर्नेछ । विधान संशोधन, राजनीतिक प्रतिवेदन, कांग्रेसले लिने अर्थनीति संशोधन लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछ । तर, पार्टीभित्रको विवादको अन्त्य गर्छ भन्ने छैन । पार्टी बदल्न पहिला नेता बदलिनुपर्छ । नेताहरू महासमितिको बैठकबाट बदलिने अवस्था म देख्दिनँ । स्वार्थ त्याग्न सक्यौं भने पार्टीभित्र विवाद टुंगिन्छ ।
कांग्रेस थप गतिशील हुनेछ
नेपाली कांग्रेसको विधानलाई महासमितिको बैठकले समयअनुकूल बनाउनेछ । कांग्रेसलाई अझ बढी क्रियाशील बनाउने र पार्टी कार्यकर्तालाई पनि उचित भूमिका दिन सक्ने खालको विधान आउनेछ । त्यसमा पनि संविधानले भनेका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम्बोधन गर्ने खालको विधान बनाउन जरुरी छ । अहिलेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको मूल दायित्व हो । तर, हामी प्रतिपक्षमा भएका कारणले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न पनि हामीले महासमितिको बैठकले राजनीतिक नीति पनि ल्याउँछ । त्यसैले महासमितिको बैठकपछि कांग्रेस गतिशील भएर अघि बढ्छ । यसले कार्यकर्तामा ऊर्जा थप्ने काम गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
नेपाली कांग्रेस स्थापना कालदेखि नै अध्यक्षात्मक प्रणाली भएको पार्टी हो । त्यो भनेको खाली केन्द्रीय सभापतिलाई अधिकार दिने भन्ने होइन । बुथ, वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, क्षेत्र, जिल्लामा पनि सहज रूपमा नेतृत्व गर्न सक्ने र काम गर्न सक्ने भन्ने हो । तथापि कार्यकर्ताको मनोभावना हेर्दा यसलाई कलेक्टिभ लिडरसिपकै स्वरूपमा अघि जान्छ भन्ने लाग्न थालेको छ ।
हामी प्रतिपक्षमा छौं र त्यो भूमिका संसद्मा खेलिरहेका छौं । संसद्मा भएका दलहरूमध्ये हामी नै संसदीय अभ्यासलाई स्विकार्ने पार्टी हौं । संसद्मा हामीले बलियो भूमिका खेल्यौं भने नै संविधान बलियो हुन्छ र जनताका हक अधिकारलाई पनि सुरक्षित राख्दै संसदीय पद्धतिलाई अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसैले हामीले अत्यन्तै परिपक्व हिसाबले सुझबुझका साथ आफ्ना धारणा राखिरहेका छौं र राख्नेछौं ।
अब गुट र फुटको होइन जुटको राजनीति
महासमिति बैठकपछि कांग्रेस फुट र गुटको होइन जुटको राजनीतिमा लाग्नेछ । गत निर्वाचनमा हामी आफ्नै कारणले पराजित भएको कुरा सबैलाई थाहा नै छ । अब कांग्रेसलाई प्रिय र पहिलो पार्टी बनाउन हामी लाग्नेछौं र चार वर्षपछि कांग्रेस पहिलो दल बन्नेछ । निर्वाचनमा पराजित भएपछि पहिलो पटक महासमिति बैठकमा देशभरका साथीहरू बसेर छलफल गर्दैछौं । त्यहाँ खुला रूपमा आफ्ना मनका कुरा साटासाट हुनेछन् । निर्वाचन पराजयको विषयमा पनि त्यसले एउटा निचोड निकाल्नेछ । विधान संशोधन त संघीय रूपमा जानुपर्ने हुँदा गर्नैपर्ने हुन्छ । यसका साथै अन्य कुरामा पनि छलफल हुनेछन् । पार्टीलाई पहिलो र प्रिय बनाउन महासमितिको बैठकले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।